Huawei နဲ့ Leica ကြားက ဆက်ဆံရေး - PX
ခုချိန်မှာ Huawei Flagship Smartphone လို့ပြောလိုက်ရင် Leica Camera တံဆိပ်နဲ့အတူ လူအတော်များများက တွဲမြင်နေကြလောက်ပါပြီ။ အရင်က Huawei ကို ဈေးနှုန်းသင့်တင့်တဲ့ Smartphone Company အဖြစ် သိထားကြရာကနေ Leica နဲ့အကျိုးတူပူးပေါင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ သူ့တို့ရဲ့ Brand Image ကို High Quality Flagship တွေအဖြစ် မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီတော့ အဲလိုပူးပေါင်းမှုနောက်ကွယ်က သူတို့ဆက်ဆံရေးဟာ ဘယ်လိုအခြေအနေ၊ အတိုင်းအတာတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားလဲဆိုတာက စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နေပါတော့တယ်။
လူအများသိထားကြတာက Leica ဟာ Huawei အတွက် Camera Hardware တွေထုတ်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့။ ဒါဟာ မှန်သင့်သလောက်တော့မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ Glass Lens တွေကြောင့် လူသိများတဲ့ Leica ရဲ့ Huawei မှာသုံးတဲ့ Lens တွေက Plastic Lens တွေဖြစ်နေတာပါ။ (တကယ်ကတော့ Huawei မှမဟုတ်ပဲ တခြား Smartphone Lens တွေမှာလည်း Plastic ကိုပဲ အသုံးများပါတယ်၊ LG V30 မှာသုံးတဲ့ Crystal Clear Lens လို Glass အစစ်မျိုးကလွဲရင်ပေါ့) Leica ကလည်း ဒါဟာ Glass နဲ့ဆင်တူတဲ့ Plastic အကြည်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုထားတော့ Glass သုံးရင် ကုန်ကျမယ့်စရိတ်ကို လျှော့ချတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ချက်က Huawei အတွက် လိုအပ်တဲ့ Lens တွေကို Leica ကနေ Supply လုပ်ပေးတာလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။ Germany မှာရှိတဲ့ Leica ရဲ့ Campus ဟာ ဖုန်းတစ်လုံးစီမှာ Camera ၃ လုံးအထိပါဝင်ပြီး အလုံးရေ သန်းဆယ်နဲ့ချီ ရောင်းချနေတဲ့ P20 Pro လို Series မျိုးအတွက် Lens အလုံအလောက် ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်လောက်တဲ့အထိ မကြီးမားပါဘူး။ ဒီတော့ Lens တွေ ဘယ်ကရလဲ? အဖြေက Leica က Design ရေးဆွဲပြီး တရုတ်ပြည်အခြေစိုက် Sunny Optical Technology ကနေ ထုတ်လုပ်ပေးတာပါ။ (Apple က သူတို့ SOC တွေကို TSMC မှာ ထုတ်ခိုင်းသလိုပေါ့)
နောက်တစ်ချက်က သူတို့ရဲ့ Camera Sensor တွေပါ။ တကယ်တော့ Camera တစ်ပေါက် လျှမ်းလျှမ်းတောက်ခဲ့တဲ့ P20Pro မှာသုံးခဲ့တဲ့ Sensor က Sony IMX 600 ပါ။ သူ့ရဲ့ ရှေ့နောင်တော်တွေမှာလည်း Sony Sensor ကိုပဲ အသုံးများခဲ့ပါတယ်။ (ဒါပေမယ့် မိတ်ဆက်ပွဲမှာတော့ Sensor အလုပ်လုပ်ပုံကိုပြောသွားပြီး Sensor Type ကိုတော့ မမြင်တွေ့ခဲ့ရ) ဆိုတော့ကာ Huawei နဲ့ Leica ဟာ သူတို့ Flagship Smartphone Camera တွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို Supplier အသီးသီးကနေ မှာယူတယ်ဆိုတာ သိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီ Company နှစ်ခုရဲ့ အဓိက ပူးပေါင်းမှုက ဘာလဲ?
အဖြေက နည်းပညာပါ။ Huawei ရဲ့ Camera ပိုင်းမှာ Leica ရဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်မှုဟာ Hardware Design ပိုင်းသက်သက် မဟုတ်ပဲ Image Processor, နောက်ကွယ်က Image အချောသတ်ပြင်ဆင်မှုအထိ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဥပမာ Camera UI မှာ Standard, Vivid နဲ့ Smooth ကြိုက်တဲ့ Color Tone ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ Function မျိူ းဟာ Leica DSLR Camera တွေမှသုံးလာခဲ့တဲ့ Function တစ်မျိုးပါပဲ။ ပြီးတော့ Camera ပိုင်းမှာ Leica ရဲ့ ပါဝင်အားဖြည့်မှုဟာ Back Camera နဲ့ Photo ပိုင်းလို့တောင် ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက Video ပိုင်းနဲ့ Selfie Camera ပိုင်းကိုတော့ Huawei က တာဝန်ယူရတယ်ဆိုပါတော့။
ဒီတော့ Leica နဲ့ ပူးပေါင်းမှုကနေ Huawei အတွက် နည်းပညာအပြင် ဘာထပ်ရသေးလဲ?
Brand Image ပါ။ Leica မှာ တခြား DSLR, Car Camera Lens, နာရီ အပြင် တခြား Lens နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Business တွေ အများကြီးရှိနေပေမယ့် Smartphone နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ သူတို့ကြားက ပူးပေါင်းမှု မပျက်ပြယ်သရွေ့ Leica Lens တွေကို Huawei Smartphone မှာပဲ Exclusive အနေနဲ့ တွေ့မြင်နေရဦးမှာပါ။
ဒီတော့ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ လက်ရှိ Smartphone Camera လောကကို Huawei ရဲ့လွှမ်းမိုးထားနိုင်မှုဟာ သူတို့နဲ့ Leica ရဲ့ Engineer တွေ ပူးပေါင်းကြိုးပမ်းမှုကနေ ရလာတဲ့ အသီးအပွင့်တွေဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ဖန်တီးမှု၊ ဆန်းသစ်မှုတွေဆိုတာ ရပ်တံ့နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုတော့ကာ 2019 မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ P30 Pro အပြင် Mate 30 Pro မှာပါ ဘယ်လို အကြမ်းစား Camera နည်းပညာတွေကို Huawei နဲ့ Leica က မှော်ဆန်ဆန်ချပြဦးမလဲဆိုတာကို ကြိုတွေးရင်း ရင်ခုန်မိနေပါတော့တယ်။